R/wasaare Mahdi oo Xilka ka qaaday, Masuul uu Todobaad ka hor magacaabay | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
R/wasaare Mahdi oo Xilka ka qaaday, Masuul uu Todobaad ka hor magacaabay
Aug 1, 2020 - 32 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Sii-hayaha Ra’iisul wasaraha ahna Raiisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa xilka ka qaaday xoghayihii joogtada ee xafiiska ra’iisul wasaaraha Cabdirasaaq Xuseen Aadan, toddobaad un kadib markii uu xilka u magacaabay.
Cabdirasaaq Xuseen Aadan ayaa waxaa lagu bedelay Cabdiraxmaan Mucaawiye Sheekh Ibraahim oo horey u ahaa ku-xigeenka xoghayaha joogtada.
Qoraal kooban oo uu soo dhigay boggiisa twitter-ka ayuu Mahdi Guuleed ku yidhi “Waxaan Cabdiraxmaan Mucaawiye Sheekh Ibraahim u magacaabay in si KMG ah uu u haayo xilka xoghayaha Joogtada ah ee Xafiiska R/wasaaraha. Waxuu bedelayaa Cabdirisaaq Xuseen Aadan oo si KMG ah horay ugu hayay xilkaan.”
Cabdirisaaq Aadan Guuleed oo horey u ahaa agaasime ku xigeenka Villa Somalia, ayaa xilkan loo dhiibay 25-kii July, oo ahayd malaintii uu Mahdi Guuleed la wareegay xilka sii hayaha ra’iisul wasaaraha, saacado kadib markii xilka laga qaaday ra’iisul wasaare Kheyre.
Cabdirisaaq ayaa bedelay Axmednuur Maxamed Cabdi oo muddo ahaa xoghayaha joogtada ah ee xafiiska Kheyre, kaasi oo si aad ah ay isugu dhowaayeen Xasan Cali Kheyre.
You are the next six months pm howshaada wado
Fudeydkii Farmaajo iga dheh
Horey looma sheegin dowlad uu Parliament ridey oo haddana Xil magacaabeyso.
Guddi iyo xil mamagacaabikartid, Lacag kama qaadikartid CANSHUURTEENA, ilaa LAGAA ANSAXIN haddii Rasmi laguu magacaabo.
– Waa maxey Libaaxii Kheyre tagye, ka gaarsiiya intuusan Libaax kale imaanin.
Feysal Waraabe ayaan ka maqlijirey GUURTIDU AYADAA AH illegitimate marka waxey magacaabaan waa Ceeb ag taalo Somaliland Republic halka meel ee ay Shacab ku hadlo Afsoomaali codeeyaan @ sorry Ali Xubeen ( Kenya ayey codeeyaan miyaad tiri, We are talking about independent nations, not oppressed people).
Mahdi shir Guddoomin YES
@Dabshid carwtaker waa jiraa Theresa May intii PM at dooranayeen carwtaker ayaa waday howsha.
Cunugaan meesha laga qaaday wuxuu si khaldan ula dhaqmay xoghayihii hore ee Mr Khayre.Gaari uu watay ayuu ka qaaday,ma aqaan in ay ahayd qayb shaqadiisa ka mid ah iyo in kale taas ayaa caro ku dhalisay Mr khadar iyo Mr Farmaajo waa wararka qurbo joogta social media ku waalatay MA HUBO.
Haddiise ay tahay mid run ah,waa talaabo ku haboon oo sax ku ah.
Soomaali jecel qof baa leh magacaas balse qof kale baa isticmaalaaya magacan ee ogaada in magacyada layska qishaayo oo xadgudub u wado dadka raba in ay ra’yigooda ka dhiibtaan halkan. Biliiliqo baa socota waan hubaa in qofkaasu haysto magac uu ku soo galo, balse uu dulmi wado oo isticmaalo qof kale magiciisa.
Sii haayaha ayaa sii haaye u magacaabay siihayaha joogtada ee si joogta ah sii haye usii ahaan doona.
Waxaa kaloo la’iisheegay in siihaya-yaasha dhamaantood ay sii haye sii ahaan doonaan sida uu qabo xeerararka sii haayanimo ee 6da bilood.
Carwtaker ma cartaker ama wachman/washman ayaad ula jeedaa? Hadaad saa u jeedo dee waa sax mahdi guuleed na waa waashman. Kkk 😀😃😂
Sxb nin oday ah ayaa tahay oo aan qadariyo. Ninkan aad ilmaadeerka tihiin ee Kalsame denbiyo aanan weligay gelin sida cayda qabiil & kalabadh dadka meesha soo gala inay Laalays yahiin ayuu dusha iiga tuuray.
Saxiib anigu qabiil Mareexaan ma caayo, qabiil caygana ma aqaan.
Isagu Laakiin aniga & qabiilkaygaba halkaan ayuu ka cabayaa asbuucyadii na dhaafay. Aniga die maaha laakiin ma aqbali karo inuu qabiilkayka caayo.
Ma qabanaysaa inaadeerkaa? Hadii kale wuxuu igu kelifayaa inaan ana qabiilkiisa caayo.
Kkkkk taaladii mawaxaad leedahay axmed garmadoobe garbahaareey halooga dhiso waa inuu mutaystaa war CABDULAAHI yuusuf nin qaran yaqaan buu ahaa ee dabshid daji bahasha
Waar yaaban taageersanaan Farmaajo haddana daanyeerkan ilka yar ee Abdirizaaq Caato la yidhaa in si deg deg ah meesha loo dhaafiyo waan qabaa. Meesha ma maqaaxidii Afwayne ayuu mooday. Gaw
Sidee buu nin masuul ah iyo dirwalkiisi gaadhiga uu wato ugala degi karaa. Weliba gaadhiga uga bililiqaysan karaa
Nijaasnimada Soomaalida ayay ka mid tahay inay u fikiraan habkan badownimada iyo daanyeernimada leh una fikirin qarannnimo iyo dowaladnimo.
Uganda lover aka Dabshid
Waan kaa hayaa laba shay oo aad caddaysatay
1- In Iidoor yihiin dal madax bannaan
2- Ugandiiska aad tidhi innaga rabna inay Xamar Caasimaddii qaranka joogaan.
You busted Jaalle Sankadhuuhi lover…….
Bal car ka maydho labadaa khiyaano
Maalinba taariikh baa qormaysa
Waa wada Bar/badh go’a Kacaankii Cararey,
Borabiyo waa Anshax moognimadii ay sameynjireen.
Ayagoo Gurguuranhayo ayey nagu bilaabeen maxaad u maleyn markey socod bartaan.
Waxaan maqley Mareexan aad ayey ugu ciilanaayeen Mr Kheyre oo waxey u arkaan nin Labadii Kursi isku darsadey.
No Guno Kordhin
Hadal nin si u dheh, nina si u qaadey
Waxaan ka wadey Shacabka Xamar ayaan u jeedin Ugaandeska sidii Ethiopia iyo America ee ayaguba habeen kuma hoydeen,
– Somaliland soo maahan dowladdaas la wareegtey TAIWAN oo hadda Chinese leeyahey, Naga qaleeya America ayaan mashquul ku nahaye
Dalkaas ma qasbikarno, shalana qasab kumaanaan keenin.
Lkn wixii kala guur ah waa laga wadahadli.
Warka Koofur waa wada xaajood ee Xoog meesha kuma heyno.
– Adiguse @ ALI ZUBEEROW XOOGA AAD UGU DHAARAN SOMALILAND, maad JIGJIGA ku xoreysid ama Gaarisa.
daanyer kaa oo kale ayaa dadka ku jira bal hada eega canuga Facebook laga soo macabay wuxu sameyey sawir qaldan buu ka bixinaya shaqada xafiska iyo xita beesha uu ka dhashay hada maxey odhan murusadi hii awalba cadheysa oo fartu gaartey iyo hawiyihi kalo did sana ama dal dalolka raadinayey
walahi xita kaasi inuu muqdisho sii joogo meel ka dhac bey ku tahay farmaajo iyo beesha oo dhan waa in loo dira garbaharey ee layira maqxidi khadiija cagey shaaha ka cab geel was yohow soo orday
Been ha iga sheegin,sxb, waligay reer ma caayin… Iidoor iyo Snm ma cay baa?… Labaada wax aan ahayn oon iri haddaad keento anaa xaal ka bixinaya…
Inaad golaha magacya badan ku joogto un baan sheegay oo run ah, waxaad kaloodan inkiri karin inaad Mrexaan on a daily basis u aflagaadaynaysay laga bilaabo maantii uu Farmaajo xilka qabtay, adoo Farmaajo marmarsiyo ka dhiganaya…
Ma danbiyadaad gashay baad aniga dusha iga saaraysaa, halkii ka tawbad keeni lahayd?…
Ninkaa Falkaa la sheegayo hadduu sameeyay waa in uu waliba jeelka liinta ku cabbaa… Waa wax dhaqanka dawladnimada ka baxsan…
Dabshid Aka Uganda sanka dhuudhi lover
Waar kaa saari mayso degi rogoshada beenta ah. Waxaad tidhi Ugandeeska innagaa rabna. Fallaadhi gilgilasho kaagama hadho.
Si cad u qaado mowqifkeenna ah diidmada ay akhyaarta golaha ka taagaan yihiin daanyeerta sanka dhuudhiga oo dhan ee dalka gumeysato. Ama title kaasi kaa hadhi maayo. Period.
Midda Iidoorland, calanka la keenay waa kii Soomaalia. Cidda keentay waa SYL woqooyiga ee marin hababinta jooji.
Waddankan markii hore mid buu ahaa taana ayaa asal ah, falka gumeysigu halbeeg ma noqdo aan far waawayn kuugu dhigee.
Marka khiyaana qaran baad la dhex jiiftaa golahan haddii kale ka soo noqo mowqifkaasi.
Midda xoreynta jigjiga iyo Garissa waa mid iman doonto insha Allah ama ha ku timaado gori caaraddiisa, ama wada hadal ama si nasiib ah sida Itoobiya iyo Kenya oo kala yaaca laakiin u qiri maayo dalal Sanka dhuudhiga iyo Axmaarku leeyihiin.
Waar heedhee horta suaashii aan shalay ku waydiiyay maxaad uga jawaabi wayday?
Markuu sanbaloolshe haystay Xalane Lootkayd ahayd? Ma 1971 mase lootkii 1972.
Maxaa afweyne keenay meesha war dadku xanuun Sanaa soo kii soomaali kugu soo daray maaha waamo news ninkii qori jiray ayaa tahay kkkkk hakaa saarto
Wallee hawiye iyo mareexaan iyo harti xukunku dhaafimaayo iska dhaantee intaan soo socono
Iska hadlow ina Igarre……….bal hadalkaasi car sal ha yeesho.
@Laalays waan ku salaamayaa in badan.
Marka hore qabaail in la caayo sax ma ahan,haddii Kalsame caayay qabiilna odaynimaddii wuu ka baxay,labadiinnaba ka gudba oo diiniyan uga gudba.
Tan ah magacyo kale in lagu soo galo beelo kale la iska dhigo waan dareensanahay waxa ay soo kordhinayso ma aqaan.
Arrinta aan spot gareeyay ayaa ah dhowr qof oo Isaaq ah waxaan is fahansiiyay in ay ka akhlaakh wanaagsan yihiin kuwa kale ee HAWIYE Daarood.
Isaaqu waxaa ay ka hadlaan ama caayaan system inaga wada dhaxeeyay oo dawaladda ah.
Halka HAWIYE iyo Daarood qabaailka ay caayaan,arrintani salka waxaa ay ku haysaa dhaqan Somaliga iyo garashada oo Isaaq dhaamo qolyahan QADAADWEYNTA.
ALL IN ALL waxaan soo jeedinayaa Kalsame Laalays waa caaqil xaq u leh aragtidiisa,ishaydu ma qaban isagoo Marehan caayaya sidoo kale Afweyne cay ma ahan Xaaji Cabdi Waraabe oo Isaaq ahaa saaxiibna la ahaa MS Bare ayaa u bixiyay 1948kii isagoo Baladweyne jooga.MS Bare waxaa laga sheegay qofkii Afweyne igu yeeraa inuu jeclaa.
Sidoo kale qabiil aan lahayn naanays ma jiro Ilkayar waxaa ay isku mar baxeen Ilkadheer Ogaadeen 1989kii marka wax weyn ma ahan.
QABAAILKA HALA DAAYO.
Raii’sulwasaarihii hore Xasan Cali Kheyre ayaa u yeeray Madaxweynaha Galmudug Qoorqoor.
Khayre ayaa Qoorqoor ka dalbaday in uu Madaxweyne Farmaajo kala hadlo in loo dhaafo Gadiidka aan xabada karin iyo ilaalo dhowr ah.
Maanta ayay aheyd Markii Lataliyihii Khayre Yaxye Hareeri laga dagsaday Gaariga aan xabada karin oo uu horay khayre u siiyay.
Arfarmaajo ii geeya.
Farmaajoow Naga qaleey.
Farmaajo fadlan doorasho qabo.
HAWIYE MA LIBANAYAASHII LAGU LIBAANAY IGA DHEH.
Daanyeernimada Ilka yar kala tag meesha.
Afwayne kugu soo daray Somalia kulahaa sida ay Somalidu ahayn sawrac iyo soo yaal taariikheed. Wallaahi qabyaaladda ma aqaan laakiin markaan arko nin been akhrinaya baan jawaab nidaamsan siiyaa. Ma ilka yar baa la soomaaliyeey mase Ogadeenkii Jubbaland oo ah dadkii dalkaasi furtay baa la qarameeyay. Nijaas sayn leh.
Afwayne wuxuu ku dhashay Shilaabo Ogaden region oo aan xududka ku jirin sida madaxdii golaha sare ee kacaanka ma iyagaa la qarameeyay mise ajnabi bay ahaayeen
Kugu sii talax tagi maayo ee is ilaali wallee haddii kale Suldaanku taariikh aadan ka bixi karin buu halkan soo dhigi doonaa.
Midda kale Waamonews aniga ma qori jirin laakiin dadkii ka doodi jiray baan ahaa.
Xunuun siyaad baa hayaa kulahaa inta qaran dhan lagu khamaaro.
Kkkkkkkk Ali zubeer
Odayga aad abtiga u tahay ka qallee camal laakiin ilkayarta kale ilkaha kadaadi ifahan awoowe
Oday waa qaatay gartaa aad naqday. Anigu Farmaajo & Siyaad Bare ayaan dhaleeceeyaa. Laakiin abid walaahay inaanan qof nmareexaana ugu nicin uguna caayin. Hadana ma caayayo oo taladaa adaa gooyay.
Waxaa ii hadhay tan uu igula dul walacay ee ah Laalays baa 10 magac ku soo gala meesha, haduu iimaan leeyahay waan u dhaartay. Dhaartii ma aaminin. waa dhib isaga u taal, isu kaaya daa, isaga. Si raganimo leh ayaad adigu waajibkaagii u gudatay.
Ma carruur baad u sheekaynaysaa?…
Haddaad magacyada kale ku caydo iyo haddaad kan laalays ku caydo maxay ku kala duwanyihiin…
Markaan kula hadlaba soo adiga magac kale iigu jawaaba…
Gar eexeed qaawan baad golaha ka goysay…
Aad baan uga xumahay adoo xog ogaal u ah waxa meeshan ka dhacayay waayadanba inaad sidaa u hadasho…
Maxaa laalays kudaba dhigay war ninka ka fuq mideeda mareexaan ceeb baad ukeentay war anagu raga waa la kaftanaa ee cidaa tahay sheego adaanba kaa shakiyay qof walba waad Ku dhagan tahay war adoo kalaa umada nagu dira
dadki oo dhan baa kala shakisan caawa waa maxay anigu CALI ZUBEER
baan ka shakira nahay adiguna KALSAME mida kale GEDO LAND war kaagas war baa iiga baxay wana ii cadatay mid yaro shalay igu dhegana ujeed kiisa dhan inuu ahaa inu marexan igu diro ee uusan aheyn ba marexan waxan ku keenay hadal kaga ah adiga dadka nagu diraya inta kadib waar ragow aan is caayno oo aan kaftano lakin mid aan xanaqa iyo cadiifad laheyn ee barxadan uun ah waa iska caadi qanjiradu koley anigu raali baan ka ahay in la ii qanjiriyo
Ninka Ali zubeer wata waa axmed soomaali oo kale laakiin ma oga hadii biniiaadam qayaamaan inaysan ilaahay qimaayi Karin Ali zubeer ku waa qabiilii ay lafaha kagashay waana nin da ah sida axmed soomaali
war soomaalidiidku basaas waaye xaq umaleh jagadaas inuu kusii fadho
Ma adna xidtaa?… Ma magacyadii badnaa baad adna ka mid noqotay?… Wallaahi dhawr jeer baan ka shakiyay habkaad u hadlayso…
War meeshu wayba waalatay… kkkk
War waa yahay iska wata hawshiinna… Subxaanak yaa cadiim…
omadii oo dhan baa kala shakisan waaxay
waarya hee KALSAME nagada shakigan aad qof walba difaac uga jirto dadku waa wada iska reer quule meel dheer lama kala jire come down mida kale ninka GEDO LAND ah halaga leexdo golaha u baahan waa comedy
Waar kaagan la soo shirtagay Suldaan Ali Zubeer baa da’ qabiil baa ka buuxa ah, golaha waad ku cusub tahay ama weedh san la kaalay oo ku hadal ama iska galab carow.
Suldaanku dhaxaa uu soo arkay adigoo miidhan oo aanan hoorin karayn.
Ma jirto stupinimo ka weyn inaad tidhaho Siyad Barreba Shilaabuu ku dhashay oo waa xukumay Somaliya maxaa ani ii diidaaya inaan xukumo. Siyaad Barre in kastoonan jacalyn, haddan muwaadin buu haa reer Gedo ah. Islaan reer Shilaabo ah oo dhashy ayaa halkaa fooli ku qabatay, waase muwaadin xaq u lahaa inuu xukumo dalkan. Sow ma ogid dhibka Somaliya ku habsaday inuu yahay iyadoon si fiicanba loo fahmin dalkan cidda leh, waa ta keentay in Adan Gabyow oo Kenyan citizen ahaa oo ciidanka Kenya ka gaadhay captian uu noqdo wasiirka gaashaandhigga ee Somaliya oo dadki dalkan u dhashy ku xukumo. Waxaana waxa masuul ka ah siyaasda ku salaysan Somali Ethnicity ee lagu dulmo muwaadinka Somaliya.
Anigu Djibouti, Jigjiga iyo Garisa midna ma xukumi karo, iskadaa xukume waa inaan fiise u qaataa si aan u tago, adiguna waxaad u soo hanqal taagaysaa inaad Somaliyoo dhan xukunto ood leedahay ka Shalaabo ku dhashayba xukunye maxaa ani ii diidaaya.